China Factory ele mmadụ anya n'ihu mmepụta dịruru ná njọ factory na-emepụta | Zhenyuan
Nka na ụzụ na ihe ọhụrụ: SKHZ-B nc H-beam nzukọ igwe
1. Usoro mmepụta nke ịgbado ọkụ H-bekee bụ itinye h-bekee dị ka "Ọrụ" na-arụ ma wepụta nkwonkwo akuku abụọ n'akụkụ abụọ n'otu oge ahụ, nke na-eme ka ịgbado ọkụ na-arụ ọrụ nke ọma. na-ihu ọma adịghị oruru mgbe ịgbado ọkụ.
2. Orthotic usoro H ekara ígwè Flange straightening igwe nwere ike na-agbazi n'akuku deformation nke na-ekpo ọkụ H ekara ígwè nku efere mgbe ịgbado ọkụ site na nke eccentric pịa ala, nke na-ebelata ịgbatị ike ma melite nkenke nkenke.
3. Si n'ọnọdụ nke ịgbado ọkụ nkọwa, nkọwa nke ịgbado ọkụ H-doo bụ ndị kasị ibu na China, na-egosi nke h-doo ịgbado ọkụ mmepụta akara nke kasị elu h-doo ịgbado ọkụ ngwá mmepụta ụlọ ọrụ (ụlọ ọrụ ESAB) ná mba ọzọ bụ otu.
4. N'uzo nzuko na ulo, anakpo ndi mmadu nke ndi mmadu na ndi mmadu, nke na-ebelata usoro oru ma me ka oru oma meputa.
5. Na centering mode nke web na Flange efere, abụọ tent nke centering mode nke ihu na azụ na-adiaha ka mma n'ọnọdu ziri ezi.
6. Waya feeder bụ adụ ejikọrọ na ịgbado ọkụ egbe na ịgbado ọkụ n'akuku nke ịgbado ọkụ egbe nwere ike gbanwee.
7. Nnukwu fillet weld, na-eji ike abụọ (DC + AC) waya abụọ, arc abụọ, usoro ịgbado ọkụ ọdọ mmiri abụọ. Akụkụ ndị a nke usoro mmepụta a bụ ụdị nke mbụ na China.
8. Mbubata PLC njikwa, pụrụ ịdabere na, mfe mmemme.
9. N'otu ụlọ ọrụ ahụ, na-aga n'ihu mmezu nke h-beam na usoro mmepụta nke nrụpụta, ịgbado ọkụ, orthopedics, ibuli, ịchụpụ na usoro ndị ọzọ.
Khj-c kwụ flange corrector
Skhj-c kwụ flange calibrator na-eji maka Flange mmezi nke H-doo nchara.Mgbe H-doo enwezu ịgbado ọkụ usoro, nku efere nke h-doo ga-oruru n'okpuru ihe nke ịgbado ọkụ ngwa, na a ga-gbazie n'ihu ya Enwere ike iji akụrụngwa a maka mgbatị nku nku nke h-beam na T-bekee mgbe ịgbado ọkụ.
Ngwa ndị ọzọ bụ:
Igwe mkpachapụ / igwe mkpụmkpụ-isi kwụ ọtọ, CGL-4000 / NGWA igwe nchacha igwe, KT-462 / igwe akụrụngwa akụrụngwa, CG2-150B / igwe mpempe akwụkwọ, KG-30 / CNC atọ Bai drilling machine / radial mkpọpu ala igwe, 7-3040 * 16 / Magnetik wiil ọnwụ igwe, SAG- / lathe, CA6140 / mkpọpu ala na-egwe ọka igwe, ZX-32 / ahazi na-agwụ ike igwe, T4240 / Intersecting akara ọnwụ igwe, BH6070 / Vetikal pịa, Ya32-31 / kwụ pịa, DC-315 / efere akpacha ajị igweJz016-250 / njedebe igwe igwe TXSOB / GD-20 / Magnetic electric drill RD-32A / DC welder AX5-50 / AC welder BXI-500 / C02 welder YM-500KR / Submerged arc ịgbado ọkụ igwe NZA-1000 / electrode ihicha igbe HY704-4
- 50 / ọkụ ọkụ ọkụ HI / 4 l - 20 igwe ikuku ikuku / mmanụ dizel, 200 kw / sandblasting igwe PBS - 100 r / paint spraying machine GPQ9C / fork truck b / trigger CDWllHNC CPQ - 1-50 * 2500 / welding roller etiti HGZ - 5 a / flange ịgbadoro igwe YTJ 50 / ultrasonic oghom nchọpụta ECHOPE220 / dijitalụ okpomọkụ mita RKCDP - 500 / agba film ọkpụrụkpụ nlele 345 fb '- MK Ⅱ / digital clip-on ammita 2003 / okpomọkụ na iru mmiri mita WHM5 / weld nnyocha failiSK / magnetik urughuru flaw dete DA-400S / vernier caliper.
Mbelata CNC nke ngwaọrụ, mgbakọ nke ihe, ịgbado ọkụ, mgbazi, ọgwụgwọ elu ahụ, eserese
Nke gara aga: Sistemụ Mkpọrọ
Osote: Ngosipụta nke ngwaahịa nke ụlọ ọrụ
Constructionlọ ebe a na-arụ ọrụ